Waa Kumaa Halyeygii Fuliyay Camaliyaddii Istish-haadiyada Ee Muqdisho?. (Dhagayso Waraysi) – Bogga Calamada.com
Idaacadda Al-andalus ee ku hadasha afka xarakada shabaabul Mujaahidiin waxay xalay baahisay dardaaran dhaxal gal ah oo uu ka tagay halyeygii camaliyadda Istish-haadiyada ah ka fuliyay Kaantarool ka mid ah kuwa laga ilaaliyo qasriga madaxtooyada dowladda federaalka ee magaalada Muqdisho.
Camaliyaddan Istish-haadiga waxay ka dhacday Kaantaroolka laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada dowladda gaar ahaan dhanka Ceel-gaabta waxaana uu geesiga Istish-haadiga ah gaarigiisa miinaysan bartamaha ka dhigay masuuliyiin iyo shaqaale ka tirsanaa wasaaradaha dowaldda iyo xafiisyada madaxwaynaha oo hor tubnaa kaantaroolka iyagoo la marsiinayay baaritaan hubin ah.
Weerarkaas Istish-haadiga waxa uu galaaftay nolasha 16 xubnood oo ka tirsanaa dowladda federaalka una badnaa shaqaalaha ka howlgala xafiisyada Farmaajo iyo Rooble iyo dhaawaca 20 kale oo ay ku jiraan masuuliyiin dowladeed.
Halyeyga Istish-haadiga ah oo lagu magacaabo Maxamed Amiin Xaaji Xubbi loona garan ogaa (Carafaat) ama )Farxaan) waxa uu kasoo jeedaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ka hor inta uusan u dhaqaaqin camaliyaddiisa waxa uu walaalka bixiyay warasysi uu kaga tagay farriimo dhaxal gal ah.
Haddaba si aad u dhagaysato waraysiga Istish-haadiga halkan ku dhufo oo ku biir Channelkeena Telegram.